Antonio Conte Oo Ku Eedeeyay Man United Inay Isku Dayaysay Xalayto Inay Laad Garoonka Kaga Saaraan Eden Hazard | Isha Wararka Ciyaaraha
Home » Europe » Antonio Conte Oo Ku Eedeeyay Man United Inay Isku Dayaysay Xalayto Inay Laad Garoonka Kaga Saaraan Eden Hazard
Antonio Conte Oo Ku Eedeeyay Man United Inay Isku Dayaysay Xalayto Inay Laad Garoonka Kaga Saaraan Eden Hazard	Waxaa Qoray: Abdirashid Mohamud Nor "SHarDinHO" Taariikh: 14-March-2017
Antonio Conte ayaa amaanay kooxdiisa Chelsea ka dib guushii FA Cup ee ay ka gaareen Man United wareega sideed dhamaadka koobka FA Cup.
Tababaraha Talyaaniga ayaa ku tilmaamay kooxda Jose Mourinho ee Red Devils ‘ciyaartoyda ugu fiican ee Premier League’ waxaana uu sheegay in kooxdiisa ay ku faraxsan tahay guusha 1-0 ee ay gaartay.
Goolkii uu dhaliyay N’Golo Kante daqiiqadii 51aad ayaa lagu kala baxay xalayto, laakiin waxa ay noqon kartay sheeko kale haddii aan Ander Herrera casaan la siin laheyn qeybtii koowaad.
United oo ciyaarta si fiican ku bilaabatay ayaa laga dhigay 10 ciyaartoy daqiiqadii 35aad markii xiddiga khadka dhexe ee Spain uu qaatay labo kaar oo hurdi ah.
Mourinho ayaa diiday inuu ka hadlo casaankaas ka dib ciyaarta laakiin Conte ayaa soo jeediyay in garsoore Michael Oliver inuu qaatay go’aan sax ah.
Isagoo amaanayay qaab ciyaareedkii kooxdiisa una waramayay BBC waxa uu yiri: “Waa hubaal inaan qaab ciyaareed fiican kala hortagnay koox aad u xoogan oo ciyaartoy fiican heysata.
“Aniga ahaan United waxa ay heystaan ciyaartoyda ugu fiican horyaalka, ciyaartoy badan oo fiican ayay heystaan, anagana waa qasab inaan ku faraxsanahay inaan u gudubnay wareega xiga oo aan garaacnay koox weyn.”
Markii la weydiiyay fekerkiisa ku aadan casaankii Herrera, Conte ayaa hadalkiisa raaciyay: “Waxaan qabaa in markii uu Eden Hazard bilaabay ciyaarta inuu awoodi waayay inuu kubada ciyaaro.
“Dadku waa ay eegi karaan ka dib ayayna qiimeyn karaan xaalada.
“Waxaan u nimid inaan ciyaarno kubada…. laakiin muddo 25 daqiiqo ah macquul ma aysan aheyn inuu Eden Hazard ciyaaro sababtoo ah laad ayaa laga badiyay.
“Waxa ay noqon kartaa taatikadooda. Waxaan qabaa inay arintaan arkeen qof walba… mararka qaar marka aad la ciyaareyso xiddig tayo sarre leh waxaad isku dayaysaa inaad waabiso ciyaaryahankaas.
“Waxaan qabaa in garsooraha ay tahay inuu ilaaliyo ciyaaryahanka ceynkaas ah.”